Beneficios para la Salud | aguacalientealtoque
टचमा तातो पानी
तीन फेस हीटरहरू
एकल चरण हीटर
मतभेद र लाभ
पेरुभियन र ल्याटिन अमेरिकाका लागि
मेरो गृह परियोजना
के तपाई ग्यास टर्मि खरीद गर्नुहुन्छ?
हीटर स्थापना भिडियो
लाभा- T पोर्टेबल बिडेट
माइक्रोबिडेट स्थापना भिडियो
प्रस्ताव - पूर्व-स्वामित्व हीटर
प्रत्येक वर्ष करीव 3, 3,०० चोटपटक र deaths 34 मृत्यु उत्तर अमेरिका भरि घरहरूमा अत्यधिक तापीय पानीको तापले गर्दा हुन्छन्। यी दुर्घटनाहरूमा अधिकांश वृद्ध र of वर्ष मुनिका बच्चाहरू समावेश गर्दछ। युएस उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (सीआरपीएससी) ले सबै उपयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो ट्या tank्क वाटर हीटरलाई १२० डिग्री तल झार्न आग्रह गर्दछ, तथापि, पानी ताप्न परम्परागत ट्या tank्क वाटर हीटरको असक्षमताको कारण। ट्याoming्की तल तानिरहेको बेला, यो सुरक्षा प्रक्रिया चिसो वर्षामा अक्सर परिणामहरू। SYSTEMS Tankless वाटर हीटरले चाहिएको तापक्रममा असीमित मात्रामा तातो पानी आपूर्ति गर्दछ। १२० डिग्री (वा अधिक!) मा तातो पानीको आवश्यक छ र त्यसपछि यसलाई चिसो पानीसँग मिसाएर आरामदायी तापमान कायम गर्न अब आवश्यक पर्दैन। अर्कोतर्फ, किनभने तपाईंले पानीलाई पुनः तात्नु पर्दैन, तपाईंले पैसा बचाउनुहुनेछ।
Legionnaires रोग र तपाईंको पानी हीटर
लिजिएनेयर ब्याक्टेरियाहरू नदी, ताल र खोलाहरूमा पाइने पानीका प्राकृतिक बासिन्दा हुन्। ब्याक्टेरिया अपेक्षाकृत कम स water्द्रतामा वस्तुतः प्रत्येक भवनको पानी आपूर्तिमा पाइन्छ। ब्याक्टेरिया मात्र जीवन खतरामा परिणत हुन्छ जब यसको अनुकूल अनुकूल परिस्थिति अवस्थित हुन्छ। Legionnaire रोग निमोनियाको एक प्रकार हो जसले फोक्सोलाई असर गर्दछ। १००० - लेजीओनेयर रोगको १००,००० केसहरू प्रत्येक वर्ष अमेरिकामा हुन्छन्। चेतावनीको रूपमा,%% - १ 15% यी घातकहरू हुन्, विशेष गरी धूम्रपान गर्नेहरूमा वृद्धहरू र रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली बिगार्नेहरूले तिनीहरूलाई ब्याक्टेरिया संक्रमणको शिकार बनाउँछ। ब्याक्टेरिया घरेलु पानी तताउने प्रणालीहरूमा फल फलाउन पाइन्छ जहाँ विस्तार अवधिमा तापमान स्थिर तहमा राखिन्छ। यस विशेष ब्याक्टेरियाको विकासका लागि आदर्श तापमान - - - १1१ डिग्री एफ छ। इनक्युबेशन अवधि २ - १० दिन हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो तापक्रम सामान्य घर परम्परागत ट्या tank्क वाटर हीटरमा दिनको २ 24 घण्टा, वर्षमा5365 दिन राखिन्छ। अर्को शब्दहरुमा, यस रोगको विकासको लागि आवश्यक सबै सर्तहरू वाटर हीटरको औसत परम्परागत आवासीय ट्या tank्कीमा अवस्थित छन्।
तपाईको परिवारलाई किन जोखिममा राख्छ?
तपाईंको परम्परागत पानी हीटर बदल्नुहोस्; टच होट वाटर हीटरले शर्तहरू हटाउँछ जुन यो रोगको प्रजनन गर्दछ। पानी एक पटक मात्र तताइएको छ, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्दा। जब तपाईंको घरमा कसैले तातो पानी प्रयोग गरिरहेको छैन, पाइप (पाइप) मा पानीको तापक्रम (95 -1 -१31१ डिग्री एफ) भन्दा कम s 35--55 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम चिसो हुन्छ, ब्याक्टेरियाको विकासको लागि आवश्यक छ। पानीको तापक्रम never degrees डिग्रीभन्दा बढी कहिले पनि हुँदैन, एक पटकमा १ 15-२० मिनेट भन्दा बढीको लागि, निश्चित रूपमा ब्याक्टेरिया बढ्न २-१० दिन आवश्यक पर्दैन।
एक कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक ट्यांकलेस वॉटर हीटरको निर्माण र बिक्रीलाई समर्पित छ।
के तपाइँ हाम्रो प्रतिनिधि हुन चाहानुहुन्छ?
बिजुली उपभोक्ताहरूलाई खुला पत्र
ध्यान: सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान :00:०० बिहान १:०० बजे - ००:०० बिहान :00:०० बजेसम्म। SATURDAYS: बिहान :00:०० देखि १:०० बजे।
एभ। अल्फ्रेडो बेनाभिड्स १ 1396((th फ्लोर) - स्यान एन्टोनियो, मिराफ्लोरिज - लिमा - पेरु
को278२ 50 5350० /। 77743766/1143 ११ 11 55 554